असोज, ९ ।
रुकुम(पश्चिम)को राप्ती समाज अस्पताल सल्लेमा सुरु भएको ३ दिने स्वास्थ्य शिबिर आजपनि जारी रहने छ । सोमबार एक कार्यक्रमकाबिच कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले शिबिरको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
राप्ती समाज स्वास्थ्य सहकारी संस्था द्धारा संचालित राप्ती समाज अस्पतालको आयोजना र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्राबिधिक सहयोगमा सिबिर संचालन भएको हो । शिबिरमा ओपिडी सेवा, स्त्रीरोग, नाक, कान, घाँटी, बाल रोग, हाडजोर्नी तथा नसा र डेन्टल सम्बन्धि सेवा दिइरहेको आयोजकले जनाएको छ ।
३ दिने शिबिरमा स्त्रीरोग बिशेषज्ञ डा. सुप्रभा केसी, नाक कान रोग बिशेषज्ञ डा.सुभास महासेठ, बालरोग बिशेषज्ञ डा. दिपक पौडेल लगायत डाक्टरहरुको टोली खटिएको छ । सोमबार देखि सुरु भएको शिबिर भोली १० गते सम्म संचालन हुने छ ।
राप्ती समाज स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका कार्यबाहक अध्यक्ष महेन्द्र केसीको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रातो कामीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । त्यस्तै ५ नम्वर प्रदेश सभा सदस्य आशा स्वर्णकार, मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर १ का वडा अध्यक्ष बिरवल केसी लगायतको आतिथ्यता रहेकाको थियो ।
संस्थाका कोषाध्यक्ष हेमराज श्रेष्ठको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको संचालन अस्पतालका प्रबन्धक गणेश गौतमले गर्नुभएको थियो ।